Ukuzimela ebomini ngundoqo - HeraldLIVE
The Algoa Sun Ukuzimela ebomini ngundoqo January 25, 2014
U-NANDIPHA Ngoqo ukugxinisile ebantwaneni bakhe ukubaluleka kokuzimela, ukungaxhomekeki nokungaqheli ukukhongozela ngamaxesha onke.
U-Ngoqo oneshishini le bed and breakfast e-NU5 udlala indima yokuba ngumama notata kubantwana abane, abaquka nonyana wakhe u-Sinalo oneminyaka engama 27.
Olu luxanduva owaluthwala emva kokusweleka komyeni wakhe kwiminyaka emihlanu edlulileyo.
Njengaye nawuphina usomashishini, u-Ngoqo ungumntu osoloko exakekile kangangokuba kubanzima ukuchitha ixesha elaneleyo nosapho lwakhe.
“Ndingumntu oxakeke kakhulu, kodwa kuyo yonke lonto ndiyazama kangangoko ukuba kunye nosapho lwam. Siye sihlale kunye sonwabele isidlo, sixoxe ngokwenzekayo ebomini babo.”
Elithuba lokuba kunye nabantwana bakhe lunika u-Ngoqo ixesha lokubakhuthaza ukuba bazimele.
“Eyona mfundiso ndiyi gxininisayo kukuba mabangathembeli okanye bajonge kwelishishini lekhaya ndiliqhubayo.
“Kubalulekile ukuba bafunde ukuzimela, kwaye bayazi into abayifunayo ebomini.”
U-Ngoqo ukwabafundise indlela athe wazenzele ngayo indumasi eshishini lakhe.
“Ndihlala ndibaxelela ukuba ukuze ndiphumelele ebomini, ndafunda ukuzimela ndiselula.”
Kolusapho ibalulekile into yokuthetha ngokukhululekilelyo nangawo nawuphina umba abafuna ukuwushukuxa.
“Ndiyikhuthaza kakhulu into yokungoyiki ukuthetha ngemiba ebahluphayo abantwana bam.”
Olusapho lukwakholelwa ekubeni umthandazo usisiseko salo naluphina usapho olunempumelelo. “Silusapho oluthandazayo nolukholelwa ekubeni akukho nto siyenzayo singakhange sicele amandla kophezulu.”
Iphulo linceda uluntu